Wanaagsan ee Kashmir Bandhigyada Bandhigyada
Kashmir iyo waddanka Northernmost ee dalka, Kashmir ayaa si sax ah loo calaamadiyey 'Jannada on Earth' (Bhu-swarga). Kashmir Tour Packages iyo Packages Srinagar ayaa si sahlan loo heli karaa si sahamiya haraha qurux badan dabiiciga ah dabiiciga ah. Pahalgam Dalxiisku wuxuu soo jiitaa Bollywood Films si uu u toogto, iyada oo Lidder River, dhismooyin qurux badan oo lagu raaxaysto iyo albaabka loo yaqaan 'Amarnath Yatra', ayaa hubaal ka dhigaya inaad xagaaga gaarka ah samayso. Xulo Kashmir ugu fiican ee aad rabto, waxaadna ku raaxeysan kartaa meelo badan oo Kashmir ah sida Srinagar, Sonamarg, Pahalgam iyo Gulmarg.
Srinagar - Sonamarg - Pahalgam - Gulmarg (Maalmaha 05 / 06 Maalmaha | Code Code: 094)
Markaad tagto garoonka Srinagar, waxaad la kulmi doontaa wakiilkayaga waxaana laguu wareejin doonaa hudheelkaaga halkaas oo aad ku sii wadi doonto baaritaanka. Booqashada galabnimo ee booqashada muhiimka ah ee Srinagar City-Shankaracharya iyo Mughal Gardens (Nishat Bagh iyo Shalimar Bagh). Hooska joogitaanka hoteelka.
Ka dib quraacda hoteelka, Subaxdii, waxaa laguu kaxeyn doonaa safar gaaban oo maalinle ah oo loogu talagalay Sonamarg.Sonamarg (Meadow of Gold) - Waa meel qurux badan, oo ku taal Dooxada Sindh, oo ku ag maraya ubaxyo, oo ku wareegsan buuraha iyo xajmiga sare ee 2690 ee ka sarreeya heerka badda. Booqashada wakhti yar ee dalxiisayaasha, waxay leedahay sida daaqadeeda, buuraha barafka oo ka soo baxa cirka cad. Waa alpine xasilooni ku hareereysan oo ay ku hareeraysan yihiin dhuxusha, xashiishka, geedaha geedaha iyo geedaha iyo kan ugu dambeeya ee dhinaca Kashmir ee wadada Srinagar ilaa Leh. Waxa kale oo saldhig u ah khadadka xiisaha leh ee sarreeya ee sare ee xeebaha Himalayan. Ka dib markaad qado ka hesho makhaayadda maxaliga ah, ku dhaji kamaradahaaga sawir muuqaal qurxoon oo buuraha ah. Waxaad ku raaxeysan kartaa Horse Fursada Sonamarg (Xulasho). Dareewalada dambe ee dibedda ee ka yimid Sonamarg ilaa Srinagar. Hooska joogitaanka hoteelka.
Aroortii ka dib quraacda, ka hubi guriga oo gurigana u kaxee Pahalgam, safarka ku soo booqo Saffron beeraha ee Pampora, fiiri qurxinta quruxda badan, badi bariiska iyo burburinta Awantipura.
Later waxa sii wadaa gaadhigaaga Pahalgam (Dooxada Shepherds) iyada oo loo marayo kaynta geed-geedka, iskudubarka webiyada ka soo baxa webiga Lidder iyo Sheshnag Lake kuwaas oo caan ku ah quruxooda muuqaalka.
Ka dib markaad qado ka hesho makhaayadda maxalliga ah, sii wad wadiiqooyinka qalajiyaha oo ku dhaji sawiradaada sawir muuqaal qurxoon ee buuraha. Waxaad ku raaxeysan kartaa raacista Horse ee Pahalgam. (Ikhtiyaari).
Habeenimadu waxay joogaan hoteelka Pahalgam.
Subaxdii ka dib quraacda, ka soo celi hudheelka oo sii wad si aad uqurxiso galka Gulmarg. Gulmarg (Cagaarshow Gold) - Waxaa la ogaaday inay aheyd meel dalxiis ah oo ay ka soo jeedaan Britishka qarnigii 19. Intaas ka hor, xagjirayaasha Mughal waxay ku daadiyeen dooxada Gulmarg oo ku dhowaad 03 km oo dheer iyo ilaa 01 km ballaaran.
Waxaa si fiican ujoogsan geed geedka ku wareegsan oo ku yaala xeebta Pirjjal oo ah meel sare oo mitirka 2,730 oo ka sarreeya heerka badda iyo mid ka mid ah meelaha ugu caansan ee dalxiisayaasha ee Kashmir. Waxa kale oo uu leeyahay mid ka mid ah koorasyada golfka ugu caansan aduunka ee ugu sareeya oo leh xarumaha 18, iyo sidoo kale naadi, oo ah dhismo taariikhi ah oo u gaar ah. Hal qof ayaa ku raaxeysan kara raacista Gondola ama Horse ragga gawaarida ee Gulmarg. (Ikhtiyaari)
Gaadiidka-buuxa ee noocyada aan caadiga ahayn, Gulmarg's gaasta cusub ee la dhisay gondola oo ka sareeya Gulmarg sare, iyada oo loo marayo slope pag-yare ayaa aad u xiiso leh. Laga soo bilaabo Gulmarg, wadada pony ayaa kor u sii kacaysa Khilanmarg, Kangdori iyo todoba iloodh, dhowr saacadood oo ay cagaha ku dheeraato cagta.
Habeenimadu waxay joogaan hoteelka Gulmarg.
Subaxdii ka dib quraacda, ka soo celi hudheelka kuna kaxee Srinagar. Markaad timaaddo, ka hubi Guriga Guriga, kadibna ku raaxeyso raaxeysiga Shikara (Xulasho) oo ku taal harada - Waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu xiisaha badan ee nasashada ee Kashmir.
Diyaargarowga habeenkii ah ee guriga ku yaal Srinagar.
DAY 06: SRINAGAR - XADIISKA BAARLAMAANKA
Subaxdii ka dib quraacda, ka soo celi hudheelka kadibna waxaa laguu wareejin doonaa garoonka Srinagar wakhtiga si aad ugu soo qaadato duulimaadka si dib loogu noqdo.